people Nepal » झापामा गोली लागेर एकको मृत्यु , के थियो घटना रहस्य ? झापामा गोली लागेर एकको मृत्यु , के थियो घटना रहस्य ? – people Nepal
झापामा गोली लागेर एकको मृत्यु , के थियो घटना रहस्य ?
Posted on October 28, 2017 by Durga Panta
कात्तिक ११ : झापाको बिर्तामोडमा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ । अर्जुनधारा–५ का ३२ वर्षीय नरेश थापाको प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएको झापा प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।